Age-by-Age Child Sex Education - My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
ခုလိုမြိုး သကျငယျမုဒိမျးမှုတှေ၊လိငျပိုငျးဆိုငျရာအကွမျးဖကျမှုတှနေဲ့ လိငျပိုငျးဆိုငျရာကူးစကျရောဂါပွသနာ၊မလိုလားအပျတဲ့ကိုယျဝနျရခွငျး စတဲ့စတဲ့ ပွသနာမြားစှာကွုံတှနေ့ရေတဲ့ခတျေကာလမှာ မိဘမြားအနနေဲ့ မိမိတို့ရဲ့ကလေးမြားကို မြိုးဆကျပှားကနျြးမာရေးနဲ့ လိငျပိုငျးဆိုငျရာအသိပညာမြားကို ငယျစဉျကတညျးကပငျ အသကျအရှယျအလိုကျပွောပွထားခွငျးဖွငျ့ မလိုလားအပျတဲ့ ပွသနာရပျမြားကိုကာကှယျထားသငျ့ပါတယျ။
မိဘမြားအနနေဲ့ ကလေးငယျတှကေို လိငျပိုငျးဆိုငျရာအသိပညာပေးခွငျးကို ဘယျအရှယျမှာစတငျပွောပွသငျ့တယျ…..ဘယျလိုအကွောငျးအရာတှပွေောပွထားသငျ့တယျဆိုတာ သိထားဖို့အတှကျ… ကလေးတှရေဲ့ အသကျအရှယျအလိုကျ ပွောပွသငျ့တဲ့ မြိုးဆကျပှားကနျြးမာရေးဆိုငျရာအကွောငျးအရာလေးတှကေို ဖျောပွပေးလိုကျပါတယျ:
အသကျ ၂နှဈအရှယျမှာဆိုရငျ သငျ့ကလေးကို မြိုးဆကျပှားအင်ျဂါတှအေပါအဝငျ ဘယျကိုယျခန်ဓာအစိတျအပိုငျးကိုဘယျလိုချေါတယျဆိုတာကို ကလေးနားလညျလှယျမယျ့အချေါအဝျေါနဲ့ ပွောပွထားပါ။ မြားသောအားဖွငျ့ အသကျ ၂နှဈအရှယျလောကျဆိုရငျ ကလေးမြားဟာ ယောကျြား မိနျးမ အထီးအမ ခှဲခွားသိနိုငျကွပါပွီ။
၂နှဈ မှ ၅နှဈအရှယျြ
ဒီအရှယျမှာ မြိုးဆကျပှားခွငျးရဲ့အခွခေံသဘောတရားစတငျရှငျးပွသငျ့ပါတယျ။ ယောကျြားနဲ့မိနျးမတူတူနရေငျကလေးရတယျ၊ကလေးဟာမိခငျရဲ့သားအိမျထဲမှာကွီးထှားဖှံ့ဖွိုးတယျဆိုတဲ့ သဘောတရားကို ကလေးအရှယျနဲ့သငျ့လြျောမယျ့ စကားလုံးအသုံးအနှုနျးနဲ့ပွောပွပါ။
ကလေးကို မိမိခန်ဓာကိုယျကို မိမိပိုငျကွောငျး၊ အခွားသူကိုထိတှကေို့ငျတှယျခှငျ့မပေးသငျ့တဲ့ ခန်ဓာကိုယျအစိတျအပိုငျးတှအေကွောငျးကို သခြောနားလညျအောငျရှငျးပွပါ၊
၅နှဈ မှ ၈နှဈအရှယျ
ယောကျြားနဲ့မိနျးမ စိတျဝငျစားမှုတှအေပွငျ…..လိငျတူခငျြးစိတျဝငျစားမှု၊ လိငျစုံစိတျဝငျစားမှုတှပေါရှိကွောငျး အခွခေံသဘောတရားကို သဘောပေါကျလှယျမယျ့ အသုံးအနှုနျးဖွငျ့ရှငျးပွပါ။ လူတဈဦးနဲ့တဈဦး လေးစားမှုရှိဖို့သငျပွပေးပါ။
ကလေးအခြို့ဟာ အသကျ ၁၀နှဈမတိုငျမီမှာ အပြိုဖျော လူပြိုဖျောဝငျတတျကွတာကွောငျ့ အပြိုဖျော လူပြိုဖျောဝငျခြိနျမှာကွုံတှရေ့မယျ့ ခန်ဓာကိုယျပွောငျးလဲမှုအပါအဝငျ အခွခေံသဘောတရားတှကေို ကွိုတငျပွောပွထားပါ။
လူသားမြိုးနှယျတှရေဲ့ မြိုးဆကျပှားခွငျးနဲ့ လိငျဆကျဆံခွငျးအကွောငျးကို ကလေးအသကျအရှယျနဲ့လိုကျဖကျမယျ့ စကားအသုံးအနှုနျးဖွငျ့ ပွောပွပါ။
၉နှဈ မှ ၁၂နှဈ
အထကျမှာပွောပွခဲ့တဲ့ အကွောငျးအရာတှကေို ပိုမိုပွညျ့စုံအောငျ ပိုမိုနားလညျအောငျရှငျးပွပါ။
ထို့အတူ စိတျခရြသောလိငျဆကျဆံမှု၊ကိုယျဝနျတားနညျးမြားနဲ့ လိငျမှတဈဆငျ့ကူးစကျတတျသောရောဂါမြားအကွောငျးကို ပွောပွဆှေးနှေးပါ။
ကောငျးမှနျပွီးကနျြးမာရေးနဲ့ညီညှတျတဲ့ ယောကျြားမိနျးမ ပတျသကျဆကျနှယျမှုနဲ့ အန်တရာယျမြားပွီးကနျြးမာရေးထိခိုကျစသေော ပတျသကျဆကျနှယျမှုမြားကို နှိုငျးယှဉျပွောပွပါ။
မီဒီယာတှမှောပါတဲ့ လိငျပိုငျးဆိုငျရာဖျောပွခကျြ ရေးသားခကျြတှနေဲ့ပတျသကျပွီး မှနျ/မမှနျ ၊အဓိပ်ပါယျရှိ/မရှိ၊ကောငျး/မကောငျး ပိုငျးခွားဆုံးဖွတျနိုငျအောငျ ကူညီလမျးညှနျပေးပါ။
၁၃နှဈ မှ ၁၈နှဈ
ဒီအရှယျတှမှော ဆယျကြျောသကျကလေးမြားဟာ အရမျးကိုသိုသိပျလြှို့ဝှကျတတျကွလို့…. မိဘမြားအနနေဲ့ ငယျငယျကတညျးက ဒီလိုအကွောငျးအရာမြိုးတှကေိုမပွောပွထားဘူးဆိုရငျ….
သူတို့ရဲ့အရေးကိစ်စတှကေိုလညျး သငျ့ကိုလြှို့ဝှကျထားမှာမို့ မလိုလားအပျတဲ့ပွသနာတှေ သငျမသိလိုကျဘွဲဖဈသှားနိုငျပါတယျ။
ငယျငယျကတညျးကသာ သငျ့အနနေဲ့ အပျေါမှဖျောပွထားသလိုမြိုး အသကျအရှယျအလိုကျ သိထားသငျ့တာလေးတှပှေငျ့ပှငျ့လငျးလငျးပွောပွဆှေးနှေးထားမယျဆိုရငျ သငျ့ကလေးအနနေဲ့ ပွသနာကွီးကွီးမားမားရှိလာခဲ့မယျဆိုရငျ သငျ့ကိုပွောပွတိုငျပငျဖို့ဝနျလေးနမှောမဟုတတော့ပါဘူး။
ဒေါကျတာဝငျး (UM 1)
ခုလိုမျိုး သက်ငယ်မုဒိမ်းမှုတွေ၊လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုတွေနဲ့ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကူးစက်ရောဂါပြသနာ၊မလိုလားအပ်တဲ့ကိုယ်ဝန်ရခြင်း စတဲ့စတဲ့ ပြသနာများစွာကြုံတွေ့နေရတဲ့ခေတ်ကာလမှာ မိဘများအနေနဲ့ မိမိတို့ရဲ့ကလေးများကို မျိုးဆက်ပွားကျန်းမာရေးနဲ့ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအသိပညာများကို ငယ်စဉ်ကတည်းကပင် အသက်အရွယ်အလိုက်ပြောပြထားခြင်းဖြင့် မလိုလားအပ်တဲ့ ပြသနာရပ်များကိုကာကွယ်ထားသင့်ပါတယ်။
မိဘများအနေနဲ့ ကလေးငယ်တွေကို လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအသိပညာပေးခြင်းကို ဘယ်အရွယ်မှာစတင်ပြောပြသင့်တယ်…..ဘယ်လိုအကြောင်းအရာတွေပြောပြထားသင့်တယ်ဆိုတာ သိထားဖို့အတွက်… ကလေးတွေရဲ့ အသက်အရွယ်အလိုက် ပြောပြသင့်တဲ့ မျိုးဆက်ပွားကျန်းမာရေးဆိုင်ရာအကြောင်းအရာလေးတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်:
အသက် ၂နှစ်အရွယ်မှာဆိုရင် သင့်ကလေးကို မျိုးဆက်ပွားအင်္ဂါတွေအပါအဝင် ဘယ်ကိုယ်ခန္ဓာအစိတ်အပိုင်းကိုဘယ်လိုခေါ်တယ်ဆိုတာကို ကလေးနားလည်လွယ်မယ့်အခေါ်အဝေါ်နဲ့ ပြောပြထားပါ။ များသောအားဖြင့် အသက် ၂နှစ်အရွယ်လောက်ဆိုရင် ကလေးများဟာ ယောက်ျား မိန်းမ အထီးအမ ခွဲခြားသိနိုင်ကြပါပြီ။
၂နှစ် မှ ၅နှစ်အရွယ်ျ
ဒီအရွယ်မှာ မျိုးဆက်ပွားခြင်းရဲ့အခြေခံသဘောတရားစတင်ရှင်းပြသင့်ပါတယ်။ ယောက်ျားနဲ့မိန်းမတူတူနေရင်ကလေးရတယ်၊ကလေးဟာမိခင်ရဲ့သားအိမ်ထဲမှာကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးတယ်ဆိုတဲ့ သဘောတရားကို ကလေးအရွယ်နဲ့သင့်လျော်မယ့် စကားလုံးအသုံးအနှုန်းနဲ့ပြောပြပါ။
ကလေးကို မိမိခန္ဓာကိုယ်ကို မိမိပိုင်ကြောင်း၊ အခြားသူကိုထိတွေ့ကိုင်တွယ်ခွင့်မပေးသင့်တဲ့ ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းတွေအကြောင်းကို သေချာနားလည်အောင်ရှင်းပြပါ၊
၅နှစ် မှ ၈နှစ်အရွယ်
ယောက်ျားနဲ့မိန်းမ စိတ်ဝင်စားမှုတွေအပြင်…..လိင်တူချင်းစိတ်ဝင်စားမှု၊ လိင်စုံစိတ်ဝင်စားမှုတွေပါရှိကြောင်း အခြေခံသဘောတရားကို သဘောပေါက်လွယ်မယ့် အသုံးအနှုန်းဖြင့်ရှင်းပြပါ။ လူတစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး လေးစားမှုရှိဖို့သင်ပြပေးပါ။
ကလေးအချို့ဟာ အသက် ၁၀နှစ်မတိုင်မီမှာ အပျိုဖော် လူပျိုဖော်ဝင်တတ်ကြတာကြောင့် အပျိုဖော် လူပျိုဖော်ဝင်ချိန်မှာကြုံတွေ့ရမယ့် ခန္ဓာကိုယ်ပြောင်းလဲမှုအပါအဝင် အခြေခံသဘောတရားတွေကို ကြိုတင်ပြောပြထားပါ။
လူသားမျိုးနွယ်တွေရဲ့ မျိုးဆက်ပွားခြင်းနဲ့ လိင်ဆက်ဆံခြင်းအကြောင်းကို ကလေးအသက်အရွယ်နဲ့လိုက်ဖက်မယ့် စကားအသုံးအနှုန်းဖြင့် ပြောပြပါ။
၉နှစ် မှ ၁၂နှစ်
အထက်မှာပြောပြခဲ့တဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို ပိုမိုပြည့်စုံအောင် ပိုမိုနားလည်အောင်ရှင်းပြပါ။
ထို့အတူ စိတ်ချရသောလိင်ဆက်ဆံမှု၊ကိုယ်ဝန်တားနည်းများနဲ့ လိင်မှတစ်ဆင့်ကူးစက်တတ်သောရောဂါများအကြောင်းကို ပြောပြဆွေးနွေးပါ။
ကောင်းမွန်ပြီးကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တဲ့ ယောက်ျားမိန်းမ ပတ်သက်ဆက်နွယ်မှုနဲ့ အန္တရာယ်များပြီးကျန်းမာရေးထိခိုက်စေသော ပတ်သက်ဆက်နွယ်မှုများကို နှိုင်းယှဉ်ပြောပြပါ။
မီဒီယာတွေမှာပါတဲ့ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဖော်ပြချက် ရေးသားချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး မှန်/မမှန် ၊အဓိပ္ပါယ်ရှိ/မရှိ၊ကောင်း/မကောင်း ပိုင်းခြားဆုံးဖြတ်နိုင်အောင် ကူညီလမ်းညွှန်ပေးပါ။
၁၃နှစ် မှ ၁၈နှစ်
ဒီအရွယ်တွေမှာ ဆယ်ကျော်သက်ကလေးများဟာ အရမ်းကိုသိုသိပ်လျှို့ဝှက်တတ်ကြလို့…. မိဘများအနေနဲ့ ငယ်ငယ်ကတည်းက ဒီလိုအကြောင်းအရာမျိုးတွေကိုမပြောပြထားဘူးဆိုရင်….
သူတို့ရဲ့အရေးကိစ္စတွေကိုလည်း သင့်ကိုလျှို့ဝှက်ထားမှာမို့ မလိုလားအပ်တဲ့ပြသနာတွေ သင်မသိလိုက်ဘြဲဖစ်သွားနိုင်ပါတယ်။
ငယ်ငယ်ကတည်းကသာ သင့်အနေနဲ့ အပေါ်မှဖော်ပြထားသလိုမျိုး အသက်အရွယ်အလိုက် သိထားသင့်တာလေးတွေပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောပြဆွေးနွေးထားမယ်ဆိုရင် သင့်ကလေးအနေနဲ့ ပြသနာကြီးကြီးမားမားရှိလာခဲ့မယ်ဆိုရင် သင့်ကိုပြောပြတိုင်ပင်ဖို့ဝန်လေးနေမှာမဟုတတော့ပါဘူး။
ဒေါက်တာဝင်း (UM 1)
What If Your Child Is Watching Porn?